Ogologo Ogologo Anya Ọkwọ ụgbọala, Led Spotlights Driver, Supermarket Lighting Led Driver Manufacturer in China
Nkọwa:Elu Anya Anya Ọkwọ ụgbọala,Led Spotlights Ọkwọ ụgbọala,Onye na-akwọ ụgbọala ọkụ ọkụ,,,
Home > Ngwaahịa > Ebube Ndị Na-ahụ Maka Ụlọ Ahịa > Onye na-akwọ ụgbọala ọkụ ọkụ
200-480Vac nnukwu eletriki na-agba ọsọ eletriki
UFO Azụ Mmiri Na-ahụ Maka Oké Osimiri
Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ ọrụ
Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ n'ahịa
Ọkwọ ụgbọala dị elu
Ọkwọ ụgbọala n'èzí n'èzí
Ọkwọ ụgbọala na-aga n'ihu ugbu a
Ebube Ndị Na-ahụ Maka Ụlọ Ahịa
Ọkwọ ụgbọala na-agba ọkụ mgbe niile
Ọkwọ ụgbọala na-edozi
Onye na-akwọ ụgbọala na-acha ọkụ ọkụ
Onye na-akwọ ụgbọ na-anọ ọdụ
Ọkwọ ụgbọala na-ebuchaghị ibu
Ngwaahịa nke Onye na-akwọ ụgbọala ọkụ ọkụ , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Elu Anya Anya Ọkwọ ụgbọala , Led Spotlights Ọkwọ ụgbọala suppliers / factory, wholesale high-quality products of Onye na-akwọ ụgbọala ọkụ ọkụ R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Onye na-eduzi ọkụ eletrik dị elu  Kpọtụrụ ugbu a
Igwe ọkụ na-enwu ọkụ site na Simplex Marketing  Kpọtụrụ ugbu a
Igwe ọkụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
0-10V Dimming Led Driver 60W  Kpọtụrụ ugbu a
0-10V Ogwe aka n'enyemaka Ike 60W  Kpọtụrụ ugbu a
Ebube ọkụ ọkụ dị elu nke ọkụ ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwá Ọrụ Ahịa Supermarket | Ọkwọ ụgbọala ọhụụ  Kpọtụrụ ugbu a
Onyinye Ntanetị ọkụ eletrik ọkụ ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
UL Supermarket Power Supply-LED Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-eduzi ọkụ eletrik dị elu
Nkwakọ ngwaahịa: 50PCS / CARTON
Inye Ike: 200000pcs
Ngwá Ọrụ Ahịa Supermarket Na oge nke ịzụ ahịa awa 24, ego eletrik nwere ike ịbụ ezigbo nchegbu maka ụlọ ahịa. Dịka onye nwe ya, ịchọrọ ka ngwaahịa ndị dị na shelf gị na-ele ihe kachasị mma n'enweghị nchegbu gbasara ụgwọ ndị na-abịa na ya. Ngwá...
Igwe ọkụ na-enwu ọkụ site na Simplex Marketing
Fahold bụ onye na-akwọ ụgbọala na-arụ ọrụ nke na-emepụta ndị na-enye ike na-enye ọrụ nke na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ ruo ihe karịrị afọ 9. Ndị ahịa ejirila ntụkwasị obi tụkwasị obi iji nye ha ngwaahịa na ọrụ ọhụụ na ọ bụ naanị onye nrụpụtara onwe ya...
Igwe ọkụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ ọkụ
Ọnụahịa otu: USD 6.5 / Piece/Pieces
0-10V Dimming Led Driver 60W
0-10V Ogwe aka n'enyemaka Ike 60W
Ọnụahịa otu: USD 5.5 / Piece/Pieces
Ebube ọkụ ọkụ dị elu nke ọkụ ọkụ
Onyinye ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ Ụlọ ahịa na ahịa dị mma nwere mkpa ọkụ dị iche iche. Ngalaba ọ bụla nke ụlọ ahịa na-achọ ụdị ọkụ ọkụ dị iche iche, iji hụ na e chebere nri na ndị ahịa ahụ nwere ahụ ụtọ na ụlọ ahịa ahụ. Na, n'ihi na ọkụ na-adị na mgbe...
Ngwá Ọrụ Ahịa Supermarket | Ọkwọ ụgbọala ọhụụ
Onyinye Ntanetị ọkụ eletrik ọkụ ọkụ
UL Supermarket Power Supply-LED Driver
Ịmepụta nnukwu ụlọ ahịa bụ ihe ịma aka dị mgbagwoju anya na nke na-adọrọ mmasị, ebe ọ bụ na ịkwesịrị itinye ọtụtụ ụdị isi iyi dị iche iche. Ewezuga ọkụ ọkụ n'ozuzu, ịchọrọ ụdị dị iche iche nke ntụrụndụ na-adabere na ụdị ụdị nri ị na-eme. Atụmatụ...
China Onye na-akwọ ụgbọala ọkụ ọkụ Ngwa
Maka ọkụrị ahịa Supermarket, e nwere ụdị ọkụ dịgasị iche iche nwere ike itinye na nnukwu ụlọ ahịa. Anyị Constant ugbu a ọkụ ọkụ Ike Ngwuputa nso awade awa si 100mA ruo 2000mA; Ọkụ ọkụ ọkụ ike ọkọnọ elu anya ọkụ ọkwọ ụgbọala na- enye elu efficiencies, PFC, dị na klas P mmepụta; Ntụle IP maka ájá na mmiri site na IP20 ruo IP67 na nchebe maka mkpirikpi mkpirikpi, n'elu voltaji, n'elu ihe karịrị ọnọdụ okpomọkụ. Nhọrọ ndị ọzọ dị ntụgharị na PWM, 1-10V, Resistive ma ọ bụ triac na-arụ ọrụ ọrụ.
Kpọtụrụ maka ọkụ ahịa ụlọ ahịa, dị ka ogwe ọkụ ọkụ na ọkpụkpụ nke ogologo oge iji jiri ya, ọkwọ ụgbọala na-ekpuchi ọkụ na nnukwu PF Value, ntụpọ ntụpọ ntụle n'elu nchebe voltiji, nchebe mkpirikpi mkpirikpi, nchedo kedu oghe. BỤGHỊ iri anọ na- emepụta atụmatụ.N'ihi na nnukwu ụlọ ahịa awa iri abụọ na anọ iji ya, n'ihi ya, ikike dị mkpa nke ndụ dị elu, na-adịkarị 50,000 awa, ọ dịkarịa ala afọ 5.
Voltage ọsọ ọsọ: 100-277vac / 100-240vac / 100-130vac / 180-240vac / 100-347V
mmepụta voltaji: 25-40vdc / 27-42vdc / 35-45vdc / 50-70vdc / 12Vdc / 24vdc
ugbu a: 100mA-8000mA.
Ihe kpatara ike:> 0.9
> = 50000hours, afọ 3-5.
akwụkwọ: UL CE FCC TUV SAA ect.
Kedu uru nke ọkwọ ụgbọ mmiri dị?
Egwuregwu Ọdịdị Ụtọ
Ihe bara uru na-eduzi ọkwọ ụgbọala maka ụlọ ọrụ, azụmahịa na ngwa ndị ọzọ
Ezi àgwà nke ọkwọ ụgbọala ìhè na arụmọrụ dị elu iji zute ihe dị iche iche achọrọ
Mfe ịtụ ma wụnye, na-achọ obere oge, belata nchịkọta nkwakọ ngwaahịa na mgbagwoju anya
Ihe ngwọta dị mfe
Q 1 : Ị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahịa?
Azịza: Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Q 2 : Ụgwọ ịkwụ ụgwọ?
Azịza: 30% TT ego + 70% TT tupu mbupu, 50% TT ego + 50% LC itule, Ụgwọ ịkwụsị
nwere ike ikwurịta.
Q 3 : Gini bu isi ahia nke ulo oru?
Azịza: Nlekọta elele anya maka ndị na-eduzi LED na ndị dimmers na 2010. Anyị nwere ndị engineen 28 nke raara onwe ha nye nyocha na ịmepụta LED na-achịkwa ma na-agbanwe usoro.
Q 4 : Olee ihe ga - eme ma ọ bụrụ na anyị enwee nsogbu mgbe ị natara ngwaahịa gị?
Azịza: Anyị nyochachara ngwaahịa anyị tupu mbupu. Ozugbo ị nwetara ngwaahịa ị na-enweghi afọ ojuju, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị n'oge, anyị ga-eme ike anyị niile iji dozie nsogbu ọ bụla gị na ọrụ ahịa anyị mgbe emesịchara.
Elu Anya Anya Ọkwọ ụgbọala Led Spotlights Ọkwọ ụgbọala Onye na-akwọ ụgbọala ọkụ ọkụ